जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति सासंद रौनियारको पहलमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण बिरगंज सम्वाददाता, बिरगंज, ९ असार । पर्सा क्षेत्र नं. ३ बाट निवार्चित प्रतिनिधि सभा सासंद हरिनारायण रौनियारको पहलमा पर्साको विभिन्न स्वास्थ् २०७८ असार ९, बुधबार,११:५४:AM
फौजी किरा नियन्त्रण गर्न किसानलाई निःशुल्क विषादी भोजपुर, ८ असार । अमेरिकन फौजी किराले मकै बाली नष्ट गरेपछि भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले निःशुल्क विषादी वितरण अभियान थालेको छ । फौजी किराका कारण समस्या परेका कृषकलाई लक्षित पौवादुङमा गाउँपालिकाले कृषकलाई निःशुल्क विष २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०९:१७:PM
सर्वोच्चको आदेशलाई अजय निरालाले गरे स्वागत चितवन सम्वाददाता, चितवन, ०८ असार। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चितवनका सह-इन्चार्ज अजय निरालाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०९:०७:PM
निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३४ सय ९ वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा काठमाडौं, ८ असार । विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो २४ घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने ३ हजार ४ सय ९ वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तीमध्ये १ हजार ३२ वटा गाडी र २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०४:१८:PM
आजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा संचालनमा काठमाडौं, ८ असार । आजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा खुल्ला भएका छन् । असार ६ गते आइतबार बसेको तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञालाई खुकुलो गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका बैंक तथा वित्तीय संस् २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०१:३८:PM
राधी विद्युतको साधारण सभा असार २९ गते, लाभांश प्रस्ताव कति ? कठमाडौं, ८ असार । राधी विद्युत कम्पनीले असार २९ गते साधारण सभा गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यान दिँदै कम्पनीले भर्चुअल माध्यमबाट कम्पनीको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सभा गर्ने भएको हो । २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०१:३३:PM
सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको इकाई असार १६ गतेदेखि बिक्री गर्ने काठमाडौं, ८ असार । सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजनाको इकाई असार १६ गतेदेखि बिक्रीमा ल्याउने भएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले आफ्नै व्यवस्थापनमा २ करोड इकाई बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त इकाईमध्ये १० प्रतिशत इकाई कोष प् २०७८ असार ८, मङ्गलबार,०१:२७:PM
नेप्सेमा आज ७१ अंकको पहिरो, आज यी कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार नेप्सेमा आज ७१ अंकको पहिरो काठमाडौं, ७ असार । साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । नेप्से सूचक घटेर राताम्मै छन् । नेप्से आ २०७८ असार ७, साेमबार,०४:५७:PM
धनकुटा चौबिसेका युवा उद्यमी दिपक दाहालको बाख्रा पालन मोह नोदनाथ त्रिताल, धनकुटा धनकुटा, ७ असार । एउटा व्यक्तिको अठोटले समाजमा कति परिवर्तन ल्याउन सम्भव छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् बाख्रा पालक यु २०७८ असार ७, साेमबार,०३:०६:PM